Mkpụrụ Semalt na-atụ aro Ntuziaka Google Analytics maka mmalite
Ịbụ otu n'ime ngwá ọrụ kachasị elu nke na-enyere aka nyochaa ọganihu nke ụlọ ọrụ, ihe nchịkọta Google Analytics na Ngini Nchọnchọ Agaghị enwe ike ịmepụta njikarịcha. Nchịkọta Google bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị mma nke meziwanye arụmọrụ weebụ gị n'ịntanetị, ọnụọgụ nke ndị ọbịa na saịtị gị, na ọnụego blọgụ nke saịtị gị.
Ịmepụta ụzọ ziri ezi maka okporo ụzọ gị mkpọsa SEO na ịchọta bọọlụ na okporo ụzọ n'ime ụlọ enweghị ike imesi ike. Dị ka onye na-amalite, nghọta SEO basics na otu esi nyochaa okporo ụzọ a na-achọghị na ịchọta akụkọ gbasara Google Analytics dị ezigbo mkpa.
Nke a bụ ntụziaka dị mfe sitere na Igor Gamanenko, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Semalt , iji nyere gị aka ịghọta Google Analytics kpamkpam - sailun rehvide tootja.
Usoro Nchịkọta Google
Mgbe ọ bịara na nchịkọta Google, ọ dị mkpa ka a ghara inwe nchegbu nke mkpa ịghọta nghọta okwu. Dịka ọmụmaatụ, ọ ga-adị mma ịgbaso usoro ziri ezi mgbe ị na-etinye nchịkọta Google Analytics na ebe nrụọrụ weebụ gị iji zere iwefu ozi bara uru. Na nkuzi a, ọnụego ụgwọ, nleta, na ndị nleta pụrụ iche ga-akọwapụta iji nyere ndị nhazi aka ịghọta Google Analytics..
Usoro nyochaa Google Analytics
Ịkụda ahịa ị na-atụ anya pụtara ọtụtụ mgbe ọ bịara Search Engine Optimization. Usoro nchịkọta nchịkọta Google na-arụ ọrụ dị mkpa iji nyere ndị ọkachamara ahịa ahịa aka ma ọ bụ ndị nwe ụlọ ọrụ ntanye ọganihu ha. Ịchọpụta ebe ndị ọbịa gị pụrụ iche si na enyemaka ụlọ ọrụ na-eme ka ahụmịhe ha n'ịntanetị nwekwuo ike ịme ka njikọ aka nke onye ọrụ na ịkwọ ụgbọala n'ụzọ ziri ezi.
Iji nweta mgbasa ozi dị irè, n'ikpeazụ, tụlee ịmebe ihe mgbaru ọsọ gị na Google Analytics na ịchọta ha ugboro ugboro. Enwere ike ime ka mkpọsa SEO dị irè site n'itinye isi egwuregwu na ebe nrụọrụ weebụ gị na ewepu bots si na akaụntụ gị.
Nyochaa ebe nrụọrụ weebụ na-eji GA
Google Analytics bụ ngwá ọrụ pụrụ iche nke na-enyere ndị ahịa aka ahịa aka ịdebe ihe omume na-ewere ọnọdụ na mgbasa ozi. Ịmara ebe enwere ike ịnweta site na a pụghị ịdaba mgbe ọ na-abịa n'ịntanetị ahịa. Nchịkọta Google na-eme ka ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ nọrọ n'ọnọdụ ka mma iji jide ndị nleta anya site n'ịghọta ihe ụtọ ha na mmasị ha site n'iji ụba ọnụego.
Nchịkọta Analytics Google na Njikọ Outbound
Ịghọta na ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla na-adabere na njikọ njikọ dị iche iche ga-etinye gị n'ọnọdụ dị mma iji mezuo njikarịcha Search Engine. Ịdepụta ọdịnaya ọhụrụ na nke mbụ na weebụsaịtị gị dị ezigbo mkpa mgbe ọ bịara ahịa ahịa . Jiri ohere ndị dị mkpa iji kpoo ahịa ị na-eche ma nweta ezigbo okporo ụzọ na ogologo oge. Maka ndị mbido, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji ghọta otú e si eji njikọ ndị si esi pụta na otu esi eweta ha na Google Analytics.
Ị chetụla echiche n'icheta otú onye ọrụ gị si eji ndị ọbịa gị na ndị ọrụ gị rụọ ọrụ? Imeri ndị na-ege gị ntị na ozugbo gụnyere mkpebi siri ike na mgbalị. A tọhapụrụ ọtụtụ isiokwu na-atụle otú data a na-achọghị na-ewepụ si data Google Analytics. Ekwela ka ndị spammers na-achịkwa ebe nrụọrụ weebụ gị. Gaa na ntuziaka ndị nchịkọta Google Analytics iji nwee nghọta miri emi banyere ọrụ GA.